Misafidy ny typeface mety ho an'ny tetik'asa famoronana sary | Famoronana an-tserasera
Misafidy endri-tsoratra mety amin'ny tetikasa iray
Jose Angel | | General, Cheats
Toy ny maha-zava-dehibe ny endrika, ny loko toy ny typography amin'ny asa famolavolana. Ary araky ny fantantsika rehetra ankehitriny, ampiasao ny typografia tantara an-tsary sans tsy dia mahomby. Miankina amin'ny maodelin'ny asa ataonao, ny iray na ny hafa hahomby kokoa. Izany dia vokatry ny sary tianay omena ny marika izay soloinay.
Ny typeface ho an'ny trano fisakafoanana haingam-pandeha dia tsy hitovy noho ny orinasan-sidina. Ny sasany hanan-kery bebe kokoa, ny hafa hanana tanjaka bebe kokoa na mila izany koa izy ireo nampiana na milamina kokoa. Homena eto ny sasany amin'ireo torohevitra tsara indrindra hisafidianana ireo endritsoratra tonga lafatra ho an'ireo tetik'asa samihafa ananantsika.
1 Ny toetra
2 Diniho ny zava-bita
3 Fitsapana mafy
4 Toro-lalana sy sary
5 Ny typeface manodidina antsika
Araka ny efa nolazainay tamin'ny teny fampidirana dia hananan'ny tsirairay avy toetra hafa. Google dia te-hanavaka ny tenany amin'ny Coca-Cola, toy izany koa Famoronana an-tserasera hanao izany avy amin'ny Vaovao IPhone.
Alohan'ny hanombohana tetikasa iray, andao isika hieritreritra soatoavina sy teny izay mamaritra ny fahatsapana ny zavatra tiantsika hamorona. Ohatra, ny endriny ve ho sariaka, hendry, na azo antoka? Mifantoka amin'ny karazan'olona rehetra sa manokana? Fero ny tenanao amin'ny toetra telo hahazoana hevitra mazava kokoa ny lalana hananan'ny loharanonao. Ny endritsoratra sariaka dia azo boribory ary tena azo vakiana. Ny fiantohana dia mety ho angular.
Diniho ny zava-bita
Ilaina foana ny manome antoka fa azo antoka ny endritsoratra voafantina ho an'ny tranonkala ary azo adika amin'ny browser tanteraka. Raha mampiasa tranomboky fonts na rakitra rakitra azo antoka Internet (OTF) ianao dia tsy maintsy arovana tambajotra ny endritsika.
Ny singa faharoa hodinihina eto dia ny fahombiazana. Ny fampiasana tranomboky toa an'i Google Fonts na Adobe Typekit dia manome antoka fa voalamina ny zava-drehetra ary afaka manantena fahombiazana tsara ianao. Rehefa alainao izany a endri-tranonkala alao antoka fa ao anatin'izany ny endri-tsoratra rehetra ilainao any aoriana. Raha voafetra amin'ny litera sy tarehinao fotsiny ny tenanao dia mety mila mamorona marika fiantsoana na karazana hafa tsy hita ao amin'ny fonosana fonosana ianao.
Andramo hatrany ny karazana anao amin'ny endrika mifandraika amin'ilay tetikasa. Tsy fantatrao raha toa ka miasa ny typeface raha tsy efa hitanao amin'ny habeny marina sy raha mandeha ny elanelam-potoana. Mila hevitra azo antoka momba ny endrik'izany ianao, izay matetika tsy ho azonao amin'ny latinina sandoka.
Toro-lalana sy sary
Ny fitarihana maso dia ny endritsoratra sy ny endriny, raha ny tonal kosa dia ny fandaminana ny teny hamoronana hafatra. Ireo singa roa ireo dia tokony hifanaraka sy hifampiarahaba. Andao hampiasa ireo soatoavina nanapahanay hevitra teo aloha, mba hahalalana izay tena lazain'ny loharanom-baovao iray ary toy ny ahoana ny hafatra rehefa ampitahanao amin'ny voasoratra. Ny endritsoratra marina dia afaka manitatra ny teny toy izao, noho izany ny toetra mampiavaka ny endritsoratra dia zava-dehibe amin'ny fiasan'ny fifandraisana.
Ny sasany amin'ireo toetra tokony hodinihina dia ny lanjany, boribory, halava ary ny fomba fivezivezan'ny endritsoratra isaky ny litera. Izy ireo dia mety ho rovitra eo anelanelan'ny serif, sans-serif, dash, na koa ny lamaody tarihin-tànana. Ny toetran'ny endritsoratra tsirairay dia hanampy amin'ny fanentanana fahatsapana na hafatra.
Ny typeface manodidina antsika
Na aiza na aiza no misy ny typography. Arakaraka ny ahitanao azy manodidina anao, ary manapahanao hevitra momba izay ataonao sy tsy tianao, dia vao mainka azonao atao ny mandray fanapahan-kevitra hendry kokoa rehefa mifidy endri-tsoratra. Amin'ny maha-mpamorona na fialamboly anao dia tokony ho fantatrao ny endriny manodidina anao amin'ny fotoana rehetra. Tsy afaka ny ho zavatra ao an-tsaintsika io rehefa tena ilaintsika izy. Tokony ho hitantsika izay manodidina antsika ho antony manosika antsika hahomby amin'ny tetikasanay.
Araho ny #hasthags amin'ny media sosialy, vakio ny bilaogy momba ny endritsoratra, tsidiho ny karazany endritsoratra amin'ny tranonkala ary tazomy ny masonao rehefa mivoaka. Ampitahao ny asa tsara ataon'ny sasany amin'ny ratsy ataon'ny sasany, makà sary ary miresaka amin'ny namana mampitaha ny tsy fahombiazana sy ny fahombiazana. Arakaraka ny ahitantsika azy voalohany, no hahalalantsika bebe kokoa azy rehefa miresaka momba ny famolavolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Misafidy endri-tsoratra mety amin'ny tetikasa iray
Paleta miloko tonga lafatra ho an'ny asa rehetra
Tolotra manokana: mitahiry 60% amin'ity lohahevitra mega ity ho an'ny Wordpress avy amin'ny Visualmodo